आज असार ६ गतेका मुख्य समाचार-सवारीमा जोर बिजोर, भारी बर्षा, रेखाको आक्रोश, रमेश प्रसाईको लालमोहर आउदै – Classic Khabar
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा २,४०१ जनामा कोरोना संक्रमण, थप ३४ जनाको मृत्यु । बाढीले हेलम्बुमा धनजनको ठूलो क्षति, २३ जना अझै बेपत्ता । उपत्यकामा खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, सवारी चलाउने-नचलाउने अलमल । सरकार उभियो, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको परीक्षा सुरु । सभापतिमा शेर बहादुर देउवालाई निधिको चुनौती । कक्षा १२ को परीक्षा भदौमा हुने ।
यातायात र यर्पोट सम्बन्धि महत्वपुर्ण सुचना । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३,४४१ सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा । महन्थ ठाकुरले कीर्ते गरेको उपेन्द्र पक्षको आरोप । खाने तेलको भाउ अहिलेसम्मकै धेरै यसबारे पुरै जानकारी । बाढी र पहिरोमा परी एक सातामा १७ जनाको मृत्यु । रेखा थापाको आकोर्ष : राप्रपा वयस्क र रिटायर्डहरुको सरोकार समूह मात्र हो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार । भारी वर्षाको सम्भावना कायमै, सतर्क रहन आग्रह मौसम सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी । मेलम्ची बाढीपीडितका नाममा चन्दा उठाए एक लाख जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने । नागरिकता मधेसको मात्र समस्या होइन : शेखर कोइराला । विपद् जोखिम न्यूनीकरणामा विशेष ध्यान दिन राष्ट्रपतिको आग्रह ।
निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन : पसल खोल्न टाइम कार्ड, सवारी साधनलाई अन्तिम नम्बर प्रणाली । के हो ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? कहाँबाट गरियो नक्कल ? विज्ञहरु के भन्छन् । विदेश जाने प्रयोजनका लागि तोकिएका प्रयोगशालालाई मात्र परीक्षण अनुमति : स्वास्थ्य मन्त्रालय । मेरै नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउछु : देउवा । रमेश प्रसाइले प्रस्तुत गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम लालमोहर आउदै ।
Prevसंगै भएका साथीहरुलाई बगाएर लग्यो लास पनि भेटिएको छैन, नारायण भने रुखमा अड्केर बाँचे
Next..त्यसपछि बेहुलाले बेहुलीलाई मोटरसाइकलमा लिएर फर्के